Tora Zororo | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 13, 2012 Svondo, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Ini handizive nezvako, asi kuve mune yekushambadzira tech nyika inogara ineni pamberi pekombuta kana padhesiki rangu. Sezvineiwo, izvo hazvina kunyanya kunaka kumiviri yedu, sekutsvaga kwakaitwa neLearnstuff.com.
Vanhu kazhinji vanobwaira kanokwana ka18 paminiti. Asi kana iwe uchinge wakatarisana nekombuta yekombuta, iwe unongogona kungobhenekera kanenge ka7, izvo zvinogona kutungamira kuComputer Vision Syndrome. 9 kubva pavanhu gumi vanopedza anopfuura anopfuura 10 maawa anoenderera vakatarisa pakombuta, uye kushandisa mbeva kwemaawa anopfuura makumi maviri pasvondo kunowedzera mukana wako wecarpal tunnel syndrome ne2%. Zvese mune zvese, zvinoita sekutarisa pakombuta HAKUNA kwakanakira hutano hwedu.
Asi kutora zororo kunogona kubatsira zvakanyanya kurara kwedu, maziso, misana, uye yakazara maitiro. Tarisa uone rumwe ruzivo pane iyi inotonhorera infographic yekuchengetedza hutano hwako kana uchishanda pakombuta zuva rese!
Tags: kombiyutaComputer Vision SyndromedhesikiScreenKumbozorora
Nov 13, 2012 pa10: 15AM
Ndira 18, 2013 na1: 26 PM
Mhoro jenn, ndinoziva izvi ndezvekubva pano, asi ndingave ndinoziva ndiani infograph's illustrator yeichi chakapinda? Ndotenda zvikuru !
Ndira 18, 2013 na3: 43 PM
Iwe unofanirwa kutarisa kune vanhu kuLearnstuff @tanxiuwen: disqus! Vakaburitsa infographic - uye vakaita basa rakakura!